Caalamka, 24 January 2016
Axad 24 January 2016
Meydadka Muhaajiriin Oo Laga Helay Greece
Dadkan ayaa waxaa laba dooni oo kala duwan ay kula qalibmeen xeebaha dalka Greece, waxaana la la' yahay dad kale.
Suuqyada Yurub Iyo Asia Oo Sare U Kacay
Suuqa Tokyo ee Nikkei ayaa kusoo xirmay sare u kac 6% ah, halka suuqyada kalena ay heleen ugu yaraa 2 boqolkiiba.
Xaakim British ah ayaa sheegay in Putin uu ansixiyey qorshe lagu sumeeyey jaajuus ka tirsanaan jiray KGB-da oo London lagu dilay.
Qorshahan ayaa faraya haweenka soo galootiga ah inay laba sano iyo bar gudahood ku bartaan luuqadda, haddii kale la masaafurin doono.
Wakiilka QM ee Syria Staffan de Mistura ayaa doonaya inay wada-hadallada dhacaan 25-ka January, hase yeeshee ma muuqato taas.
Iran ayaa laga qaaday cunaqabateyntii saarnayd, kadib markii la xaqiijiyay inay fulisay qodobadii heshiiskii ay la gashay waddamada awoodda leh. Iran ayaa heli doonto hanti balaayiin ah oo laga xayiray, sidoo kalena waxay dhoofin doontaa saliideeda.
Tsai Ing-wen oo Doorashada ku Guuleystay
Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka Taiwan, Tsai Ing-wen ayaa ku guuleysatay doorashadii maanta dalkaasi ka dhacday, waxaana lagu wadaa inay noqoto haweenaydii ugu horreysay ee madaxweye ka noqoto Jaziiradda Taiwan.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iran, Maxamed Javad Zarif, ayaa sheegay in cuna-qabateynta caalamiga ah ee saaran Iran la qaadi doono maanta oo Sabti ah, marka hey’adda Atomikada aduunka ee IAEA ay soo saarto warbixinteeda ugu dambeysa ee barnaamijka Nukliyarka ee Iran.
Taiwan: Doorashadii Madaxtinnimo oo la soo Afjaray
Waxa maanta la soo gababeeyey doorasho ka dhacaysay Taiwan, taas oo dalkaas qaaradda Asia ku yaalla u keeni karta isbeddel weyn.
Weerarkan iyo qaraxyadan isku xirnaa oo lagu tuhmayo koox xiriir la leh Daacish ayaa waxaa ku geeriyooday 7 qof, oo 5 mintid ay ku jiraan.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa qabatay su’aal xasaasi ah oo la xariirta haddii ay Iraan bixineyso iyo in kale ku dhawaad laba bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo magdhow ahaan loo siinaayo qoysaska dhibbanayaal ku dhintay weeraro hore u dhacay.